DEG DEG+XOG:Musharaxii ugu miisaanka cuslaa oo la qaarajin rabo & Dowladda oo qorshihii ay ku dili lahayd diyaarisay xili doorashadii….. – Puntlandtimes
DEG DEG+XOG:Musharaxii ugu miisaanka cuslaa oo la qaarajin rabo & Dowladda oo qorshihii ay ku dili lahayd diyaarisay xili doorashadii…..
BAYDHABO(P-TIMES)- Afhayeenkii hore ee kooxda Al-Shabaab Mukhtaar Roobow Cali ayaa lagu soo waramaya inuu ka war helay qorshe ay wado madaxtooyada Soomaaliya oo la doonaayo in isaga lagu qaarijiyo.
Roobow ayaa diiday inuu ka tanaasulo doorashada Koonfur Galbeed, waxaana jira warar sheegaya in Khayre iyo Farmaajo ay lacag ugu yabooheen Roobow si uu uga hadho doorashada laakiinse uu diiday dalabkaasi.
Khayre iyo Farmaajo ayaa waxa ay doonaayaan in la doorto Cabdicasiis Lafta Gareen halka Roobow isna uu doonayo in isaga la doorto maadaama uu yahay qofka kaliya ee ay Digil iyo Mirifle isku raacsan yihiin.
Si aanay iskaga qasaarin lacagta lagu bixiyay Lafta Gareen ayaa waxaa Villa Soomaaliya go’aan ku gaahay inuusan tartamin Roobow.
Ilo muhiim ah oo Roobow ku dhow ayaa sheegay inuu wadaadku ka war helay inuu jiro qorshe la doonayo in lagu qaariyo oo ay wado dowlada dhexe, waxaana uu bilaabaya inuu samaysto ilaalo xoogan oo reerkiisa u badan.
Waxay dad badan oo xogogaal ah sheegeen in arrintan fulinteeda ay iska kashanayaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamadii uu dhowaan Ra’iisal wasaare Khayre geeyey magaalada Baydhabo, waxaana kale oo jira qorshe ah in Roobow lasoo xidho walowse arrinta hada ay macquul noqon wayday fashilantayna.
Hadii ay dhacdo in uu Roobow ku baxo gacanta dowladda waxaa dhici kara dagaalo kale iyo qala qalaase kale oo xoogan, taas oo sababi karta in dowladda dhexe ay lugaha la gasho bur bur xoogan.